Mayor Cynthia Mqwebu’s welcome at Masinenge launch: ISIZULU – eHowzit
Mayor Cynthia Mqwebu’s welcome at Masinenge launch: ISIZULU
EHOWZIT RECEIVED THE FOLLOWING STATEMENT FROM THE HIBISCUS COAST MUNICIPALITY:
WELCOME ADDRESS BY THE MAYOR CLR NCP MQWEBU
AT THE LAUNCH OF MASINENGE HOUSING PROJECT
MEC for Human Settlements and Public Works, MPL Ravi Pillay
uMeya womkhandlu uGu, umama uNtombifikile Gumede
Abaholi bakahulumeni abakhona phakathi kwethu
Abasebenzi abakhona namhlanje
The contractor for this housing project
Phambili nentuthuko kwaMasinenge phambili!
Phambili nohulumeni onakekelayo phambili!
Ngifisa ukuthi ngiqale ngokubonga ithuba ongiphe lona Mphathi woHlelo. Njengomasipala namhlanje sijabule kakhulu ngokwenzeka lapha kaMasinenge. Siyazi ukuthi abantu balendawo sebelinde isikhathi eside sisazama ukuxazulula udaba lokwakhiwa kwezindlu, kepha namhlanje sizothi halala mphakathi ngoba intuthuko isifike qathatha.
Mphakathi wonke, kumele simbonge uhulumeni wentando yeningi owathatha izintambo zombuso ngo-1994 ngamagalelo akhe kumsebenzi wokwakhela abantu bakithi izindlu. Siyazi ukuthi ngaphambilini izindlu bezitholwa ngabathile kuphela; nalapho zigcine ezindaweni ezisedolobheni.
Kuthe uma kuthatha uhulumeni oholwa iqembu elibusayo ngo 1994, kwathathwa isinqumo sokuthi izindlu zizokwakhelwa wonke umuntu onesidingo, kungabhekelekile ukuthi uhlala edolobheni noma emakhaya.
Ngiyazi siye sibe nezikhalo zokuthi ukwakhiwa kwezindlu kuhamba kancane, ikakhulu kulendawo. Kepha kumele sikhumbule ukuthi lomsebenzi usuke uqalwa phansi, ngakho-ke miningi imigudu ekufanele ilandelwe ngaphambi kokuthi kubekwe isitini.
Kusiphoxile siwumkhandlu ukubona into esiyifunde ephepheni eshiwo elinye lamakhansela e- Democratic Alliance, ukhansela u- Dave Snashall.
Ubaba u- Snashall uzama ukudidisa umphakathi uma ethi izinhlelo zezindlu zisukunyelwa ngoba kuza ukhetho ngonyaka ozayo.
Njengoba bengichazile, uhulumeni kaKhongolose lolu hlelo uluqale ngo- 1994, ngenxa yokubona indlela abantu bakithi ekade benganakiwe ngayo ngaphansi kahulumeni wobandlululo. Siyazi sonke ukuthi thina ndlu emnyama besincishwe yonke into, ngisho isithunzi sethu imbala. Yingakho uhulumeni athatha lesi sinqumo sokuthi abuyise isithunzi semiphakathi yethu ngokuyakhela izindlu ezinesizotha. Ezingeni lethu, izindlu sesizakhile eMkholombe, e-Louisiana kanye nasezindaweni eziphethwe amakhosi asakhele.
Ngaphezu kwalokho, umphakathi wakwaMasinenge vele ubuvotela iqembu elibusayo kwizinketho ezidlulile, ngakho- ke asikho isizathu esingaholela ekutheni size sisebenzise ukwakhela abantu bakithi izindlu njengethuluzi lezombusazwe.
Ngaleyo ndlela siyakuchitha njengento engesilo neze iqiniso okushiwo ukhansela u- Snashall nahambisana nabo.
Sizoninxusa futhi mphakathi wakithi ukuthi singadidiswa izinkulumo ezifana nalezi, ezikhulunywa osomathuba abafisa ukufeza izinhloso zabo.
Umphakathi wale ndawo uzohlomula ngezindlu ezingaphezu kuka 800, nezizokwenza ukuphila kube ngcono. Ngaphezu kwalokho, kuzolungiswa imigwaqo, kufakwe namanzi ukuze sisebenzise izindlu zangasese ezisezingeni. Ngiyanibongela ke bantu bakwa Masinenge ngoba baningi abanye abasalufisa lolu sizo olutholwa yinina.
Ngiphinde ngibonge nesineke senu, nibambisene nohulumeni oseduze nani, umasipala. Kuningi esesidlule kukho sizama ukulungisa lolu daba, kepha anikaze nidikibale, benilokhu nisebenzisana namakhansela nabasebenzi bomnyango wethu wezezindlu. Sifisa sengathi ningaba isibonelo nakweminye imiphakathi esalindele izidingo.
Ngiyafisa ukuthi nginiyale kodwa ngaphambi kokuthi ngihlale phansi. Mphakathi, izindlu zakhiwa ngenhloso yokuthi kusizakale labo bantu abangasoze baba nawo amandla okuzakhela. Sithemba ukuthi wonke umuntu obhalisile lapha ukuleso simo, kungabikho abantu abazothola izindlu kungafanele. Okwesibili, uma senizitholile izindlu zenu siyacela phela ukuthi nizinakekele, kube amakhaya afudumele anesizotha. Sikhumbule ukuthi sinezingane, ngakho- ke kubalulekile ukuthi zikhule ngaphansi kwesimo esizobakha, sibakhele ikusasa.
Okokugcina, ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga kuNgqongqoshe wezeZindlu esihamba naye, ubaba u-Ravi Pillay. Umnyango awuphethe unomthwalo omkhulu wokuphakela isiFundazwe sethu sonke ngezindlu ezisezingeni. Kepha ngoba unentshisekelo yokubona abantu bakithi bephila impilo engcono, umsebenzi wakhe uwukhuthalele ngendlela emangalisayo, kanti usebenza nazo zonke izinhlaka zikahulumeni ngokuthembeka. Ngikholwa ukuthi miningi eminye imiphakathi kule ndawo yakithi esazozuza ngenxa yamagalelo akhe.
Ngalawo mazwi ngithanda ukuthi namukelekile nonke kulo mcimbi. Sengathi singaziphatha kahle, silalele izinkulumo ngesizotha.
Cllr NCP Mqwebu